Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Ebiede si Nigeria & ụwa | TAA
FEC kwadoro N68.6 ijeri maka ụzọ oru, N10.7 ijeri maka osikapa ...
Gọọmenti Umahi nyere iwu ka e jidere ya na ebubo na-egbu egbu
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke abụọ dị ọcha na-amasị ikechukwu Ezenwa
Chongqing nchịkwa: Andres Iniesta na-ebugharị 'nrọ'
Home Tags FC Ebiere
Onye ọrụ nta MFM FC Sunday Ojieh kwụsịrị
Onu ogugu ndi kwadoro iwepu na nyochaa na News Agency nke Naijiria (NAN), kwuru na osopu nke onye ndu ndi ozo bu na mberede.
Ụlọ ikpe ndị India na ụlọnga nke ụnyaahụ ejirila maka ndụ onye ụkọchukwu na-ekwusa maka ịzụta nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma, ihe kachasị emetọ megide onye a sị na ọ bụ "chi" nke na-azọrọ na ya nwere ọtụtụ nde ụmụazụ ụwa.
FEC kwadoro oru N68.6 maka ụzọ oru, ugbo N10.7 maka osikapa osikapa
Onye isi oche nke Federal Executive (FEC) onyeisi oche nke President Muhammadu Buhari na-elekọta onyeisi ala nke ụnyaahụ na ụnyaahụ kwadoro nchịkọta ego N68.6 maka ụzọ a na-ewu n'okporo ụzọ.
Gov. David Umahi nke Ebonyi nyere iwu ka e jidere onye uweojii a na-ejikọta na Squad Anti Kidnap (AK) nke ndị uweojii na-ahụ maka steeti, bụ ndị kwuru na ha gburu onye ọrụ ọgba tum tum azụmahịa, nke a maara dị ka Okada na Abakaliki.
The Securities and Exchange Commission (SEC) na Wednesday, kwenyesiri ike na MTN Group emesịrị malite mkparịta ụka na ya na $ 500 nde dolla mbụ nke ọha na eze (IPO) tupu ederede ya na Njaji Ntaneti Naijiria (NSE).
Gani Fawehinmi: Ndị isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka NCP na-eleba anya na obere-ohere
Otu akụkụ nke National Conscience Party (NCP) na Lagos State agwala ndị ndú ka ha na-eleba anya na obere ihe ùgwù nke ọha mmadụ site n'inwe ohere maka ha ka ha too.
Manchester United meriri Tottenham ka ọ gaa n'ihu na FA Cup
Manchester United gafere n'ọkụ ikpeazụ nke 20th FA, nke yiri nke Arsenal kachasị oge, na 2-1 meriri Tottenham Hotspur na Wembley Stadium na Saturday.
Ụlọikpe na-eme ka Iwu Mpụpụta nke Iwu Mwegharịrị
Otu Ngalaba Abuja nke Ụlọikpe Kasị Elu nke United States emebiela ngbanwe nke Nkebi nke 25 nke Iwu Nhọrọ Ikpe, bụ nke Òtù Mba Na-ahụ Maka ya mere na February.
Nlekọta nke Ụlọ ọrụ Transmission nke Nigeria (TCN), na Monday mepụtara 100 MVA transformer na Alimosho substation, Lagos iji mee ka ọkụ eletrik ndị bi na Ikeja Disco.